Budata Tracky Train APK maka Android
Budata Tracky Train
Free Budata maka Android (30.00 MB)
Budata Tracky Train,
Tracky Train bụ egwuregwu ụgbọ oloko mkpanaka nwere egwuregwu na-atọ ụtọ ma nwee ike ịghọ ihe riri ahụ nime obere oge.
Na Tracky Train, egwuregwu ebony ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị gị na mbadamba ihe site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, anyị na-enyere ụgbọ oloko anyị aka iburu ndị njem wee tufuo ha nọdụ ụgbọ mmiri. Mana anyị anaghị ejikwa ụgbọ oloko ka anyị na-arụ ọrụ a. Ebumnuche anyị bụ isi negwuregwu ahụ bụ imeghe ụzọ ụgbọ oloko na idowe ụzọ ụgbọ oloko nokporo ụzọ ọ ga-agafe. Ọ bụ ezie na ụgbọ okporo ígwè anyị na-aga nihu na-akwụsịghị, anyị kwesịrị ịtọgbọ okporo ígwè noge ma na-aga nihu. Ọ bụ ezie na ọrụ a dị mfe na mmalite nke egwuregwu ahụ, ọ na-esiwanye ike ka ị na-aga nihu.
Ka anyị na-edobe ụzọ ụgbọ oloko na Train Train, anyị ga-etinyerịrị uche nihu anyị wee mee atụmatụ nihu maka ihe mgbochi anyị na-ezute. Mgbe anyị na-adọkwasị ụgbọ okporo ígwè megide mgbidi ma ọ bụ ihe mgbochi ndị ọzọ, anyị nwere ike ịbanye na ihe mgbochi ndị a ma ghara inwe ike ịtọgbọ okporo ígwè noge. Tụkwasị na nke ahụ, ka anyị na-adọba ụgbọ okporo ígwè, anyị enweghị ike ịgafe ụgbọ okporo ígwè anyị tọrọ na mbụ. Ya mere, a na-akpọchi ụzọ ma mechie egwuregwu ahụ. Nikwu ya nụzọ ọzọ, ka anyị na-akpọ Tracky Train, anyị na-edozi mgbagwoju anya.
Na Tracky Train, anyị na-ebuga ndị njem nokporo ụzọ ma tụba ha nọdụ ụgbọ oloko. Nụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịkpata ego. Anyị na-enwetakwa ego site nịchịkọta ọla edo nụzọ.
Tracky Train Ụdịdị
Nha faịlụ: 30.00 MB
Mmepụta: Crash Lab Limited